လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာ ဖိုက်တာတွေလို ကစားသွားမယ်လို့ ကြုံးဝါးသွားတဲ့ လမ်းပတ် – MyMedia Myanmar
လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာ ဖိုက်တာတွေလို ကစားသွားမယ်လို့ ကြုံးဝါးသွားတဲ့ လမ်းပတ်
ချယ်လ်ဆီး အသင်းရဲ့ နည်းပြဖြစ်သူ ဖရန့် လမ်းပတ်က ရလဒ်ဆိုးတွေ ကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ အတွက် စိတ်အားထက်သန်မှုဟာ နည်းဗျုဟာ‌တွေထက် ပိုအရေးကြီးကြောင်း အသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေ အပေါ် ဖိအားပေး တိုက်တွန်း ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ လမ်းပတ်ရဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်းဟာ နောက်ဆုံးကစားထားတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ၈ ပွဲမှာ ၅ ပွဲအထိ ရှုံးနိမ့်ထားတာကြောင့် လမ်းပတ် အနေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ထုတ်ပယ်ခံရနိုင်ချေ အများဆုံး နည်းပြတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကနေ ရေပန်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လမ်းပတ် အနေနဲ့ စနေနေ့မှာ ကစားမယ့် အက်ဖ်အေဖလား စတုတ္ထအဆင့် ပွဲစဉ်အဖြစ် လူတန်တောင်း အသင်းနဲ့ ရင်‌ဆိုင် မကစားမီ ကစားသမားတွေ အပေါ် တင်းမာမှု ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ လမ်းပတ် က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သူ့ကို အတွေ့အကြုံ မပြည့်ဝဘူးဆိုပြီး ဝေဖန်နေကြတဲ့ ပြောဆိုချက်တွေအပေါ်လည်း ငြင်းပယ်ချ သွားခဲ့ပြီးတော့ သူ့အနေနဲ့ ဖိအားတွေကို ကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ ကစားသမား‌တွေကိုလည်း အခုလိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ အချိန်‌တွေမှာ ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့က အသင်းနည်းစနစ်ပိုင်းထက် ပိုအရေးပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ ကျွန်တော်က ဖိုက်တာ တစ်ဦးပါ။ ဒါ ကျွန်တော် ကစားသမား ဘဝတုန်းက ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲလဲ ဆိုတာပါပဲ။ အခက်အခဲတွေရှိရင် အဲ့ဒါတွေကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ အတွက် မင်းတိုက်ခိုက်လို့ ရတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို သဘောကျပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုလိုတာက ကစားသမားတွေလည်း အဲ့ဒီအတိုင်းပဲလေ။ အဲ့ဒါက ဘောလုံးလောကထဲမှာ အကောင်းဆုံး ခံစားချက်ပါ။ အဲ့ဒါက အရည်အချင်းရှိတဲ့ အသင်းမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တချို့နေရာတွေ မှာတော့ သက်တမ်းနုပါသေးတယ် ”
“ တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာ ဘောလုံးမှာ အရေးပါတဲ့ စကားလုံးပါ၊ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ခုကို အခြားတစ်ဖက်မှာ ထားဖို့လိုမယ်ဆိုတာ သံသယ ဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူး။ အဲ့ဒါက ကျွန်တော်တို့ကို ရေတိုမှာ အနိုင်ရစေမယ့် ၄-၂-၃-၁ လည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် ၄-၃-၃ လည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ အဲ့ဒါက စိတ်အားထက်သန်မှု၊ လိုအင်ဆန္ဒ နဲ့ အသင်းရဲ့ စည်းလုံးမှုပါပဲ။ ကျွန်တော်ဒီမှာ နည်းပြမဖြစ်ခင် ကစားသမားဘဝတုန်းက ‘ ခက်ခဲတဲ့အချိန်‌တွေမှာ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ? ဆိုပြီး အမြဲတွေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်က အဆင့်အတန်း နှစ်ခုလုံးမှာ အတွေ့အကြုံရှိဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ အတော်လေးကောင်းတဲ့ ပွဲအချို့လည်း ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခင်ဗျား အနေနဲ့ ဖိအားကို ကိုင်တွယ်ချင်ရင် အဲ့ဒီအရာကို ရင်‌ဆိုင်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီနေ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖြေတွေက တိုတိုလေး ဖြစ်နေတာပါ။ တချို့ပြောစကားတွေက အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး ဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ် ” လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီက ကစားသမား ၇ ဦးအထိအလွန်အကျွံ့ ဝယ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုဝေဖန်နေတာ‌တွေအပါ် လမ်းပတ်က “ အဲ့ဒီပြောစကားတွေကို ကျွန်တော်သဘောမတူပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာက ကြိုးစားခဲ့ရုံ နဲ့ လူငယ် ကစားသမားတွေအပေါ် မြှပ်နှံခဲ့တာပါ။ သူတို့က အခုလက်ရှိအတွက်ကော၊ အနာဂါတ် အတွက်ကောပါ ” လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
The post လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာ ဖိုက်တာတွေလို ကစားသွားမယ်လို့ ကြုံးဝါးသွားတဲ့ လမ်းပတ် appeared first on MySport Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-23T12:00:49+06:30January 23rd, 2021|MYSPORT MYANMAR|